बच्चालाई भान्साको काममा पनि अभ्यस्त गराउनु पर्छ । जब बच्चा भान्सामा काम गरिरहेका देखिन्छन्, माहौल रमाइलो बन्छ । साथसाथै उनको स-सना हर्कतले मनलाई मोहित तुल्याउँछ । सोच्नुहोस् त, उसको साना औंलाहरुले आटा गोलो बनाएको, कचौरामा तरकारी मिलाउने प्रयास गरेको दृश्य कति रमाइलो हुन्छ । भान्साको माहौल रमाइलो बनाउन मात्र होइन । स्वंम बच्चाले भान्साको कामबाट … Read more
वर्षाको मैसम छ । यसबेला बच्चाहरु बिमारी हुने भय धेरै हुन्छ । त्यसो त बच्चाको प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माणकै क्रममा हुने भएकाले उनीहरु बिमारी भइरहन्छन् । बच्चाहरुमा समन्य ज्वरो आउनु, वान्ता हुनु, दिसा पातलो हुनु सामन्य हो । यस्तो समस्याका लागि अस्पताल नै धाउनु पर्दैन । तर, कहिले कहिं बच्चाको स्वास्थ्य स्थिती खराब हुन्छ र उसलाई … Read more
दाम्पत्य सम्बन्धः किन हुन्छ कलह ?
पती-पत्नीले एकअर्कालाई माया गर्नु, विश्वास गर्नु, भरोसा गर्नु स्वभाविक हो । जब तपाई पार्टनरलाई अधिक प्रेम गर्नुहुन्छ । यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो । तर, यससँगै पार्टनरको आकंक्षा भने बढ्नु हुँदैन । यदि त्यसो भयो भने तपाईहरुको सम्बन्ध कहि न कहि पुगेर नराम्ररी टुट्न सक्छ । भनाई नै छ, चिनी पनि धेरै खायो भने तीतो … Read more
विश्व सिकलसेल दिवस मनाइयो
धनगढी । सिकलसेल नेपाल कैलालीको आयोजनामा सोमबार धनगढीमा विविध कार्यक्रमसहित विश्व सिकलसेल दिवस मनाइएको छ । ‘सिकलसेल विरामीका लागि एक हौं’ भन्ने नारासहित धनगढीको क्याम्पसचोकदेखि जिल्ला विकास समितिसम्म र्‍याली निकालिएको थियो । र्‍यालीपछि आयोजित कार्यक्रममा चार वर्षदेखि अमेरिकामा सिकलसेलसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आइरहेका प्रियंकरबहादुर चन्दले सिकलसेल रोगको लागि शिशु सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनका … Read more
कुष्ठरोग रोकथाम परियोजना लागू
धनगढी । कैलालीमा कुष्ठरोग निवारणका लागि परियोजना लागू भएको छ । कुष्ठरोग लाग्नबाट जोगाउन तथा कुष्ठरोगीको संख्या घटाउने उद्देश्यले परियोजना लागू गरिएको जनाइएको छ । बिहीबार धनगढीमा परियोजना सम्बन्धि छलफल गरिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक टंकप्रसाद चापागाईको अध्यक्षतामा भएको छलफल तथा बैठकमा एनएलआरका नेशनल कोअर्डीनेटर नन्दप्रसाद बास्तोलाले कुष्ठरोगको अहिलेको अवस्था र … Read more
ग्यास्ट्रिकले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब अपनाउनुहोस् यी उपाय
भनिन्छ ग्यास्ट्रिक नेपालीको राष्ट्रिय रोग हो। धेरैको ग्यास्ट्रिक गुनासो सुन्न पाईन्छ हिजो आज । मानिस खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर रोगी छ हिजो आज। अत्याधुनिक जीवनशैली, कम ब्यायाम, मीसावट युक्त अन्न, बिशादीपूर्ण तरकारी, जिब्रोले स्वाद माने अत्याधिक भोजन जस्ता स्वास्थ्य प्रतिकुल कृयाकलापले मानिस रोग बाट ग्रसित छ। मसालेदार, तारेभुटेको, चप्प खोज्ने हाम्रो स्वादे जिब्रोनै … Read more
अहिले लिचीको सिजन छ । यो रसिलो र स्वादिलो फल हो । तर, खाली पेट लिची सेवन गर्दा ज्यान जान सक्छ । यसअघि भारतको बिहारमा खाली पेट लिची सेवन गर्दा सैयौं बच्चाको अचानक मृत्यु भएको थियो । खाली पेट लिची सेवन गर्दा चक्कर आउने, आँखा खोल्न नसक्ने र मृत्यु हुने देखियो । सन् १९९० को … Read more
धनगढी । कुनै समय थियो अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई आवश्यक पर्दा रगत खोज्न बिरामीका आफन्तलाई धौधौ हुन्थ्यो । एकातिर अस्पतालमा बिरामी र उपचारको खर्चको चिन्ता र अर्कोतिर रगतको जोहो गर्न रक्तदाताको लिष्ट बोकेर घरघर धाउनुपर्ने बाध्यता । बिरामीका आफन्तलाई दोहोरो छटपटी हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले समय बदलिएको छ । अहिले कोही पनि बिरामीलाई रगतको आवश्यकता … Read more
धनगढी । सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगहरू बढ्दै गइरहेको अवस्थामा रोग नियन्त्रण गर्न जनचेतना तथा व्यवहारमा परिवर्तन गरिनुुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नसर्ने रोगका कारण परिवारका साथै देशको ठुुलो रकम खर्च भइरहेको अवस्थामा उक्त रोगहरूलाई लाग्नै नदिने तर्फ सम्वन्धित निकायहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताइएको छ । आइतवार धनगढीमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुुचना तथा सञ्चार केन्द्र र सञ्चार … Read more
पथरैया। कैलालीको साविक पथरैया गाविसको वडा नम्बर ७ लाई आइतबार खुला दिसामुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । वडामा रहेका दुई सय ७८ घरघुरीमा शौचालय निर्माण र प्रयोगमा ल्याएपछि खुला दिसामुक्त वडा घोषणा गरिएको जानकी गाउपालिकाका वडा सचिव नारदानन्द उपाध्याले बताए । साविक पथरैया गाविसका आठ वडा वडा खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन् । कार्यक्रममा स्वास्थ स्वयंसेविका … Read more